Video Camera Laser Cutting Machines GLS-1080V - China Dongguan Glorystar Laser
Product Features Kukudzwa Laser akaita kuti chigadzirwa utsanzi itsva uye kukura, Ndizvo zvinoita munhu zvaitika wokuenzanisira adopts Panasonic 6,40 M CCD kamera kuti vapiwa kucheka zvigadzirwa rehurukuro. Izvi Camera Laser nokuveza muchina anogona kucheka kanganisika dzakarukwa kana michina trademarks zvakanyatsonaka uye zvakakwana. Dzino Laser michina vanoshandisa hwakanakisisa zvikamu kuitira nokuveza zvakarurama. Zvokuimba Design dzakatevedzana iyi Laser nokuveza michina adopts DSP nokudzora ezvinhu, 128M M ...
Order Quantity: 1 seti
Kubwinya Laser akaita kuti chigadzirwa utsanzi itsva uye kukura, Ndizvo zvinoita munhu zvaitika wokuenzanisira adopts Panasonic 6,40 M CCD kamera kuti vapiwa kucheka zvigadzirwa rehurukuro.
Izvi Camera Laser nokuveza muchina anogona kucheka kanganisika dzakarukwa kana michina trademarks zvakanyatsonaka uye zvakakwana. Dzino Laser michina vanoshandisa hwakanakisisa zvikamu kuitira nokuveza zvakarurama.
Dzino Laser kucheka michina adopts DSP nokudzora ezvinhu, 128M ndangariro, achipindira injini yabva Germany, 6.40M CCD Industrial Camera, Industrial Water kutonhora ezvinhu,-mwero nhanhatu yakarurama mutsetse gwaro pakutanga yabva Japan, 70W C02 Laser yakaitwa China. Anti-Jam Industrial Computer, Image uchibata Software uye chaiwo mukuru kwemupfungwa Manyiminya meter, 2.0 USB Data tama. LCD remadziro.
Nevakawanda kushandiswa makombiyuta dzakarukwa Labels, mugari wakarukwa Badges uye embroideries rwokugadzira hwakanaka andprecise Positioning okurwadzisa.
Laser simba 60W / 80W
kuveza Area 1000 * 800mm
Carving havukavu 0-1500mm / s
Cutting havukavu 0-800mm / s
dzokororo kunyatsoita ± 0.05mm
uchishandisa maitiro CNC kudzora maitiro
Photogragh maitiro 6.4million
kutonhora nzira kudiridza kutonhora
Power kunwa 2200mm ≦ 1250W
Working voltage 220 ± 10% 50Hz
kushanda tembiricha 0-45C
kushanda mwando 5% -95%
Cutting girafu CAD, BMP, jpg, PNG, TIF, PCX, Tag, LOO, GIF, PLT, DST
Unit uremu 270KG
Vanozivikanwa Badge Cutting
Previous: Chinjwa Uye Exchanging Table Laser Cutting Machine
Next: Laser achiita zvokutemera Zvino Kucheka Machine CMA-1080
cNC Steel Kucheka Machine
Laser Cut Stainless Steel Machinery
Laser Kucheka Machine Metal
Laser achicheka Machine Price
Laser Kucheka Machines
simbi Cutting Machine
Stainless Steel Laser Kucheka Machine Price
Steel Laser Kucheka Machine
Size Large Flat Bed Laser Cutting Machine GLC-1325
Chinjwa Uye Exchanging Table Laser Cutting Machine
Arts And Crafts achiita zvokutemera / Cutting Machine GLC -...
Double Namachinda Laser achiita zvokutemera And Kucheka Machine ...
Laser achiita zvokutemera Zvino Kucheka Machine CMA-1290T